Sidee baan u helaa tayo sare oo aan tayo fiican leh, marka laga reebo faallooyinka iyo martida?
In la dhiso qandho isku xiran oo wanaagsan oo leh tayo sarre leh Dib-u-celin dhab ah oo loo yaqaan 'DoFollow backsks' waa hawl culus oo adag. Sababtoo ah maacib kasta oo tilmaamaya boggagaaga ama blogga ayaa weli ku sii jiraya qaybaha astaamaha ah ee la tixgeliyey makiinada mootooyinka waaweyn sida Google laftiisa. Sababtoo ah, waxaan sidoo kale inta badan ku qaylin karnaa martida martida iyo faallooyinka si loo xiro qaar ka mid ah xariirka dheeriga ah ee ujeedada SEO, halkii ay ka baari lahaayeen hababka kale ee dhismaha xiriiriyaha organic. Taasi waa sababta aan hoosta ku socdo si aan kuu tuso seddexda talooyin ee soo socda si loo dhiso dib u eegis tayo sare leh iyo qaababka ugu hooseeya ee dhismaha xiriirka. Seddex Waxyaabaha Lama Yaabo Loo Isticmaalay Si Weli U Taabasho Taaban Si Loogu Sameeyo Tayada Sare Dib Loogu Dhaqaaqo
Caawiye Ka Baxsan (HARO)
malaha booska ugu fiican ee lagu heli karo qaar ka mid ah tayada sare ee tifaftirka DoFollow - si toos ah ilaha warfaafinta rasmiga ah ee badanaa la xiriira wararka. Dhammaan waxaad u baahan tahay halkan waa uun inaad saxiixdo oo aad fiirsato sanduuqa boostada. Waxaad u socotaa qiyaastii saddex wargelin maalinle ah oo ka timid saxafiyiinta dhabta ah mar walba raadinta mawduucyo kulul. Marka la eego in mawduucani yahay mid ku habboon naftaada ama ganacsiga ganacsiga ha ka waaban inaad ka jawaabto oo aad siiso qayb yar oo waxtar leh si aad u hesho qaar ka mid ah tayada sare ee DoFollow.
Dib u habeyn qayb ka mid ah qoraalkaaga caadiga ah ee caajiska ah oo si cad u muujinaya muuqaal ahaan iyo muuqaal ahaan rafcaan ahaan - sida joornaalada ama feylasha - sidoo kale waa hab weyn oo lagu dhiirigelinayo martidaada inay wadaagaan, , jiilka hogaaminaya, iyo dabcan adiga kugu xiraya tayo sare oo dib loo eego. Waxyaabahani waxay tahay in inta badan aan nasiib darro ku hayno isticmaalka waxtarka ah ee joornaalka dhismaha xiriirka dabiiciga ah. Abuurista jaantuska saxda ah ayaa badiyaa khalad ahaan loo maleynayaa in uu yahay waqti wakhti badan oo shaqadiisu aad u adag tahay. Laakiin wax walba waa wax fudud marka aad ka fekereyso. Isticmaal qalab gaar ah sida Canva, Piktochart, ama Infogr. Anigu - oo u jooji hawlgalkii hore ee cajaladda ahaa ee ku saabsanayd daqiiqadaha. Markii boogtaada ugu horreysa la sameeyo, ha ilaawin inaad u soo gudbiso mid ka mid ah goobaha la soo gudbiyey ee loo yaqaan (sida Muuqaal. ly; Qaboojiyeyaasha Cool; Infografiya oo kaliya; Infections of pure Infographics; iwm. ). Ama waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ka warhesho qaar ka mid ah bloggers kale oo ku jira nuujintaada si aad u siisid ficilkaaga dhawaan la abuuray boosteejo marti ah oo lacag la'aan ah - oo aad ku raaxeysatid dhowr tayo oo tayo sare leh.
Dib u soo celinta Backlinks
Xayeysiinta Link waa hawl aad u fudud oo u shaqeeya sida jajab dhab ah. Dhab ahaan, halkan sida uu u shaqeeyo. Isticmaal qalabka buzzsumo internetka si aad u aragto ku saabsan magaca calaamad ganacsigaaga, bogga internetka, ama blog - dhamaan waxa aad u baahan tahay waa in la ogaado cida aan kugula xidhiidhin wali. Marka xigta, waxaad si dhakhso ah u socodsiisaa adigoo soo maraya e-mayl. Dib-u-soo-celinta is-dhexgalka waa farsamo sahlan oo sahlan si loo kasbado tayo sare leh dib-u-celin dhab ah oo aan loo sooceynin profile-kaaga sababo la xiriira Source . Sidaa darteed, waa wakhti aad dib ugu soo noqotid waxa aad horay u qalantay, sax ah?